WTN nwere ajụjụ nchekwa ọhụrụ maka ahịa njem ụwa London
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » WTN nwere ajụjụ nchekwa ọhụrụ maka ahịa njem ụwa London
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • LGBTQ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • WTN
A ga -enwe ahịa njem ụwa na anụ ahụ WTM mebere. Taa, World Tourism Network ruru WTM ajụjụ abụọ dị ngwa yana arịrịọ ime ka akụkụ anụ ahụ nke Ahịa Njem Ụwa bụrụ nchekwa.
COVID-19 na nke ọhụrụ Sub-variant AY.4.2 na-eweghara isi akụkọ na United Kingdom, izu abụọ tupu Ahia njem mba uwa na London.
The Network Njem Nleta Ụwa taa wepụtara mkpesa ngwa ngwa yana ajụjụ dị mkpa Ihe ngosi Reed, onye nhazi nke Ahia njem mba uwa.
A na-atụ anya na ndị ọkachamara njem nlegharị anya sitere gburugburu ụwa ga-ezukọ na ebe ngosi ihe ngosi Excel na Nọvemba 1-3.
Ebe nchekwa njem ụwa dị na Lọndọnụ dị a safeaa?
Ahịa Njem Ụwa dị njikere igosi ụwa na ihe ngosi azụmahịa ga -ekwe omume, njem na -alaghachi na nkịtị, a na -atụkwa anya itinye ego maka njem ga -eweta mpaghara a n'ụzọ dị mma.
Na London na ebe ndị ọzọ na United Kingdom, ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, yana ebe mmemme na -emeghe. Achọghị ihe mkpuchi ihu belụsọ n'ụgbọ njem ọha. Ọnụego ụlọ nkwari akụ kacha dị elu, ndị ọbịa na -alọta.
N'otu oge ahụ, United Kingdom dekọrọ ụnyaahụ 49,139 ikpe COVID-19 na ọnwụ 179. Dị ka arEbube na CNBC, Ndị dọkịta UK na -akpọ maka iweghachite mmachi na England. Ụdị nje ọhụrụ UK hụrụ ugbu a na -efe efe karịa.
Ụwa nke njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ enweghị ike ichere izute na ikwekọrịta ndị enyi ochie na WTM na -abịanụ. Akwụkwọ a bụ onye mmekọ mgbasa ozi maka Market Travel World na onye mbipụta akwụkwọ, Juergen Steinmetz, na -akwakọba akpa ya.
Saudi Arabia naanị n'izu a gosipụtara mmekorita ya dị ka onye isi nkwado maka Ahia njem mba uwa na-eme na ebe ngosi ihe ngosi Excel na London site na Nọvemba 1-3 n'ọnwa na-abịa.
Ihe omume WTM ụbọchị 3 juputara na ihe omume na nzukọ. WTM 2021 bụ ihe ngosi izizi njem zuru ụwa ọnụ n'ezie kemgbe ntiwapụ nke COVID-19 na nkagbu ọjọọ nke ITB Berlin na 2020.
Ịkagbu Azụmaahịa Njem World London na nkeji gara aga ugbu a nwere ike mepụta nkụda mmụọ na oke ịma jijiji gburugburu ụwa. Ọ dị mkpa na WTM ga -ewere ọnọdụ maka mgbake nke ngalaba ahụ nke ukwuu.
Taa, onye isi oche njem nlegharị anya ụwa na ọkachamara nchekwa njem, Dr. Peter Tarlow, welitere ajụjụ abụọ na mkpa dị mkpa. Dr. Tarlow ga -abụkwa onye na -ekwu okwu na mpaghara mebere ahịa ahịa ụwa.
Nke a bụ ihe ndị ọbịa nwere ike ịhụ na webụsaịtị WTM gbasara nchekwa na nchekwa n'oge emume a.
Usoro nchekwa maka ịga ahịa ahịa ụwa
WTM kwuru na webụsaịtị ya: nchekwa gị na azụmahịa gị bụ ihe kacha anyị mkpa. Na WTM London, ị nwere ike nwee obi ike na ha abụọ nọ n'aka nchekwa. Nakwa iji nlezianya na -agbaso ndụmọdụ na ntuziaka ọhụụ, anyị na -arụ ọrụ na ndị ọchịchị obodo yana n'okpuru akpachapụ anya nke anyị iji tinye usoro ọhụrụ iji nyefee ihe omume dị mma maka gị izute, mụta ihe na azụmaahịa.
Nke a pụtara na mmemme anyị ga -adịtụ iche n'afọ a, mana mgbanwe ndị a ga -enye gị ohere ịnụ ụtọ ahụmịhe ka ị na -echekwa onwe gị na ndị ọzọ nchekwa.
Ndị niile bịaranụ ga-achọ igosipụta ihe akaebe maka ọnọdụ COVID-19 iji banye emume anyị. Mgbe ị bịarutere, ị ga -ewepụta ederede, email, ma ọ bụ gafere iji nyochaa ọnọdụ COVID gị bụ otu n'ime ndị a:
Ihe akaebe nke imecha usoro ịgba ọgwụ mgbochi izu abụọ tupu ọbịbịa.
Ihe akaebe nke ule adịghị mma n'akụkụ mpụta ma ọ bụ nsonaazụ PCR ewepụtara n'ime awa 48 mbata.
Ihe akaebe nke mgbochi eke sitere na nsonaazụ nnwale PCR dị mma maka COVID-19, na-adịgide ruo ụbọchị 180 site na ụbọchị nnwale dị mma yana mgbe emechara oge nkewapụ onwe ya.
A ga -ajụkwa ndị bịaranụ ka ha debanye aha kwa ụbọchị site na ebe ule NHS Test & Trace QR code. Biko rịba ama na ọnụnọ ule mpụta mpụta mpụta ihu ma ọ bụ kaadị ịgba ọgwụ mgbochi anụ ahụ ka a ga -anabata dị ka ezigbo akaebe nke ọnọdụ. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ngafe COVID, pịa ebe a.
Reed Expo, onye nhazi ahịa njem ụwa, WTM na -agwa ndị ọbịa:
WTM: Anyị na -akwadosi ike ka ị kpuchie nkpuchi ihu mgbe gị na ndị mmadụ na -agaghị anọkọ.
“Ahịa Njem Ụwa dị ka ihe ngosi azụmaahịa njem njem zuru ụwa ọnụ na -esetịpụ usoro ọ bụghị naanị maka mmemme nke ya kamakwa maka ụwa. Ikwenye ndị sonyere isonye na -enweghị nkpuchi ga -abụ naanị nchekwa nchekwa maka WTM, mana ọ ga -eziga ozi na -ezighi ezi n'oge ndị a na -ejighị n'aka, ”Juergen Steinmetz, Onye isi oche nke World Tourism Network kwuru.
WTN: Nke Network Njem Nleta Ụwa na -agba Reed ume ka ọ gaa n'ihu n'ihu na -eme nkpuchi ihu dị mkpa maka ihe omume ahụ. Nke a bụ usoro ọkọlọtọ n'ọtụtụ ihe omume ime ụlọ gburugburu ụwa. Ọ ga -abụ ihe na -enweghị isi maka WTM ikwe ka ndị bịaranụ mee nhọrọ nke onwe ha iyi ihe mkpuchi ihu.
WTN na -eme ka ọ pụtakwuo nke ọma mgbe ọ na -atụ aro ka a gbaa ndị ọbịa niile ọgwụ mgbochi. Nke a bụ ihe achọrọ maka IMEX America na-abịanụ na Las Vegas, Nọvemba 9-11.
Reed Expo, onye na -ahazi ahịa njem ụwa, WTM, na -emesi ndị ọbịa obi ike:
WTM: A ga -abawanye ikuku ikuku na ebe ngosi ihe ngosi EXCEL, na -eme ka mgbasa ikuku dị mma kwekọọ na ntuziaka ọhụụ.
WTN: World Tourism Network na-agba ụlọ ngosi ihe ngosi EXCEL ume ka ọ duzie ọmụmụ ihe ozugbo, ma kesaa nsonaazụ na etu sistemụ ikuku si dị irè megide ụdị niile nke COVID-19 gụnyere nke kachasị ọhụrụ na nke achọpụtara. AY.4.2 sub-iche.
Ọkpụkpụ coronavirus a nke Delta dị iche iche na-agbasa ugbu a na United Kingdom wee kwuo na ọ ga-efe efe karịa pasent 10-15 karịa "nne na nna" ya nke na-achịkwa ọrịa Covid-19 ugbu a n'ụwa niile.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ ụdị mgbanwe AY.4.2 a, mana echela na ọ ga-abụ ọdachi maka UK. Otu ihe ahụ, ọ nọ n'ọkwa kachasị elu kemgbe July.
Na mpụga UK, ụdị subtype a ka bụ "ihe a na -adịghị ahụkebe" nwere naanị ụdị abụọ dị na US ruo ugbu a.
taa, Morocco emechiela oke ya na UK, na -eme ka ọ bụrụ mba izizi weghachite mmachibido njem njem megide Britain.
Na Septemba afọ a, Europeanlọ Ọrụ Ọgwụ na Europe (EMA) kwupụtara ụdị coronavirus a maara dị ka "Mu" nke nwere ike bute nchegbu.
N'ime izu abụọ gara aga, United Kingdom akọpụtala ọtụtụ ikpe COVID-2 ọhụrụ karịa France, Germany, Italy, na Spain jikọtara ọnụ.